Izinto Eziyi-10 Zokusebenza Ngokuphumelelayo, Ukubandakanya Umlayezo We-imeyili | Martech Zone
Ama-Elements ayi-10 Okusebenza Kakhulu, Okubandakanya Ikhophi Yomyalezo We-imeyili
NgoLwesithathu, Agasti 11, 2021 NgoLwesithathu, Agasti 11, 2021 Douglas Karr
Ngenkathi i-imeyili ithuthuke kancane emashumini ambalwa edlule nge-HTML, ukwakheka okuphendulayo, nezinye izinto, amandla ashukumisela i-imeyili esebenzayo kuseyiyo ikhophi lomlayezo ukuthi ubhale. Ngivame ukudumala ngama-imeyili engiwathola ezinkampanini lapho ngingazi khona ukuthi angobani, kungani angithumelela i-imeyili, nokuthi yini abalindele ukuba ngiyenze ngokulandelayo… futhi kuphumela ekubhaliseni kwami ​​kubo ngokushesha okukhulu lapho ngibhalisa yabo.
Ngisebenza neklayenti njengamanje ukubhala ikhophi yama-imeyili abo amaningi azenzakalelayo… isaziso sokubhalisile, i-imeyili yokwamukela, ama-imeyili okugibela, i-imeyili yokusetha kabusha iphasiwedi, njll. Bekuyinyanga enhle yocwaningo kuwebhu futhi ngiyakholelwa ukuthi ngithole ama-nuances anele kwezinye izindatshana ezincintisanayo ukwabelana ngemicabango yami nokutholakele lapha.
Iklayenti lami belilinde ngesineke ukuthi ngiqedele lo msebenzi… ngicabanga ukuthi ngizovula idokhumende legama, ngibhale ikhophi lalo, bese ngilinikeza iqembu lalo lezentuthuko ukuthi lifake endaweni yalo. Lokho akwenzekanga ngoba yonke into kufanele icatshangelwe kahle futhi kudinge ithoni yocwaningo. Ababhalisile abanasineke kulezi zinsuku ezinkampanini ezichitha isikhathi sazo ngokucindezela ukuxhumana okungekho kwenani. Bengifuna ukuqinisekisa ukuthi isakhiwo sethu sala ma-imeyili asihambisani, sicatshangwe kahle, futhi sibekwa eqhulwini ngokufanele.
Inothi eliphansi: Angizukukhuluma kusakhiwo, ukwakhiwa, noma ukuthuthukisa lapha… lokhu kucace kakhulu kwikhophi oyibhalayo ku-imeyili yakho ngayinye.
Ama-elementi wekhophi we-imeyili asebenzayo
Kunezinto eziyishumi eziyishumi engizikhombe ekubhaleni ikhophi le-imeyili elisebenzayo. Qaphela ukuthi ezinye zazo zingakhethwa, kepha i-oda lisabucayi njengomsongo obhalise nge-imeyili nge-imeyili. Ngifuna ukwehlisa nobude be-imeyili. I-imeyili kufanele ibe yinde ngangokunokwenzeka ukufinyelela inhloso yokuxhumana… kungabi ngaphansi, kungabe kusaba khona. Lokho kusho ukuthi uma kusethwa kabusha iphasiwedi, umsebenzisi uvele afune ukwazi ukuthi enzeni nokuthi angayenza kanjani. Kodwa-ke, uma kungudaba lwezindaba ezijabulisayo, amagama ayizinkulungwane ezimbalwa angahle afaneleke ngokuphelele ukujabulisa obhalisile. Ababhalisile abanandaba nokuskena inqobo nje uma imininingwane ibhalwe kahle futhi yahlukaniselwa ukuskena nokufunda.
Umugqa Wesihloko - Umugqa wakho wezihloko uyisici esibucayi kakhulu lapho unquma ukuthi obhalisile uzovula i-imeyili yakho noma cha. Amanye amathiphu wokubhala imigqa yezihloko ezisebenzayo:
Uma i-imeyili yakho iyimpendulo ezenzakalelayo (ukuthumela, iphasiwedi, njll.), Vele usho lokho. Isibonelo: Isicelo sakho sokusetha kabusha iphasiwedi se- [platform].
Uma i-imeyili yakho ifundisa, buza umbuzo, faka i-factoid, sebenzisa amahlaya, noma ufake ne-emoji edonsela ukunakekela ku-imeyili. Isibonelo: Kungani i-85% yephrojekthi yenguquko yedijithali yehluleka?
Isandulela - Amasistimu amaningi nezinkampani azinikezi ukucabanga okuningi ngombhalo wangaphambi kwesikhathi. Lona ngumbhalo obonwe kuqala oboniswa amaklayenti we-imeyili ngaphansi komugqa wakho wezihloko. Imvamisa kuyimigqa embalwa yokuqala yokuqukethwe ngaphakathi kwe-imeyili, kepha nge-HTML ne-CSS ungenza ngokwezifiso umbhalo wangaphambi kwesihloko bese uyifihla ngaphakathi komzimba we-imeyili. I-preheader ikwenza ukwazi ukunwebela kulayini wakho wezihloko futhi uqonde ukunakwa kwabafundi, ubaphinde ubayenge ukuthi bafunde yonke i-imeyili. Isib. Ukuqhubeka nomugqa wesihloko soguquko lwedijithali ngaphezulu, i-preheader yami ingaba, Ucwaningo lunikeze izizathu ezi-3 ezilandelayo zokuthi kungani amaphrojekthi wenguqu yedijithali ehluleka kumabhizinisi.
Opening - Isigaba sakho sokuvula singaba yinhloko yakho noma ungasebenzisa ithuba lesikhala esingeziwe ukwengeza ukubingelela, usethe ngokuphelele ithoni, futhi umise umgomo wokuxhumana. Isibonelo: Kule ndatshana, sizokwabelana ngocwaningo olunzulu olwenziwe ngaphakathi kwezinkampani ze-Fortune 500 ezikhomba izizathu ezi-3 ezijwayelekile zokuthi amaphrojekthi wenguquko yedijithali ahluleke ngaphakathi kwebhizinisi.
Ukwazisa (uma uthanda) - Uma ususethe ithoni, ungafisa ukubonga umfundi ngokuzikhethela. Isibonelo: Njengekhasimende, sikholwa ukuthi kubalulekile ukwaba imininingwane enjengale ukukhulisa inani esililetha ebudlelwaneni bethu. Siyabonga ngosizo lwakho [kwinkampani].
umzimba - Hlonipha isikhathi sabantu ngokunikeza kafushane nangobuhlakani imininingwane ukuze ufinyelele umgomo owawusho ngenhla. Nazi izeluleko ezimbalwa…
Sebenzisa ukufometha kancane futhi ngempumelelo. Abantu bafunda ama-imeyili amaningi kumadivayisi eselula. Bangase bafise ukuskrola i-imeyili kuqala bese befunda izihloko zezindaba, bese bejula ngokujulile kokuqukethwe. Izihloko zezindaba ezilula, amagama anesibindi, namaphoyinti ezinhlamvu kufanele anele ukubasiza ukuthi baskene futhi bagxile kwikhophi abayithola ithakazelisa.
Sebenzisa ihluzo kancane futhi ngempumelelo. Izithombe zisiza ababhalisile ukuqonda nokugcina imininingwane oyinikezayo Ngokushesha kunokufunda umbhalo. Cabanga ngokubheka ishadi likaphayi kunokufunda amaphuzu namanani ezinhlamvu… ishadi lisebenza kangcono kakhulu. Imidwebo akumele neze ibe yisiphazamiso, noma isize, noma kunjalo. Asifuni ukuchitha isikhathi sabafundi.
Isenzo noma Ukunikezwa (uma uthanda) - Tshela umsebenzisi ukuthi kumele enzeni, kungani kumele akwenze nokuthi ukwenze nini. Ngincoma kakhulu ukuthi usebenzise inkinobho yohlobo oluthile ngomyalo okuyo. Isibonelo: Uma uhlela iphrojekthi yakho elandelayo yenguquko yedijithali, hlela umhlangano wokubonisana wamahhala manje. [Inkinobho Yeshejuli]
Impendulo (uma uthanda) - Cela futhi unikeze izindlela zokunikeza impendulo. Ababhalisile bakho bayakwazisa ukulalelwa futhi kungaba nethuba lebhizinisi lapho ufaka impendulo yabo. Isibonelo: Ngabe lolu lwazi uluthole lubalulekile? Ingabe kukhona esinye isihloko ongathanda ukuthi sicwaninge futhi sinikeze imininingwane ngaso? Phendula kule imeyili futhi usazise!
Resources (uma uthanda) - hlinzeka ngemininingwane eyengeziwe noma ehlukile esekela ukuxhumana. Lolu lwazi kufanele luhambisane nenhloso yokuxhumana. Kulesi simo esingenhla, kungahle kube okungeziwe, okuthunyelwe okuhlelekile kwebhulogi okwenzile, izindatshana ezimbalwa ezikulesi sihloko, noma izinsiza uqobo ezikhonjwe endatshaneni.
Xhuma - Nikeza izindlela zokuxhumana (iwebhu, ezenhlalo, ikheli, ifoni, njll.). Vumela abantu bazi ukuthi bangaxhumana kanjani nawe noma inkampani yakho kuma-social media, i-blog yakho, inombolo yakho yocingo, noma ngisho nendawo okuyo.
Isikhumbuzi - Tshela abantu ukuthi babhalise kanjani futhi unikeze izindlela zokuphuma noma zokushintsha izintandokazi zakho zokuxhumana. Ungamangala ukuthi mangaki ama-imeyili abantu abangena kuwo, ngakho bakhumbuze ukuthi bangezwe kanjani ohlwini lwakho lwe-imeyili! Isibonelo: Njengeklayenti lethu, ubukhethwe kulezi zincwadi zezindaba. Uma ungathanda ukuphuma noma ukubuyekeza okuncamelayo kokuxhumana, chofoza lapha.
Ukungaguquguquki kungukhiye ekwakhiweni kwakho kwe-imeyili nokukopisha, ngakho-ke setha uhlaka lwawo wonke ama-imeyili akho ukuze ababhalisile babone futhi babonge ngalinye. Uma usetha okulindelwe futhi futhi ukudlula, ababhalisile bakho bazovula, bachofoze, futhi bathathe isenzo kude kakhulu. Lokhu kuzoholela ekubandakanyeni okungcono, ukutholwa, nokugcinwa kwamakhasimende akho.
Tags: imeyiliumzimba we-imeyiliukubizelwa esenzweni nge-imeyiliikhophi le-imeyiliukubhala nge-imeyilii-imeyili ctaukuzibandakanya kwe-imeyiliunyaweni we-imeyiliukufometha i-imeyiliihluzo ze-imeyiliunhlokweni we-imeyiliimeyili Marketingukuvulwa kwe-imeyiliimpendulo ye-imeyiliukugcinwa kwe-imeyiliukubingelela nge-imeyiliizigaba imeyiliumugqa wesihloko se-imeyiliphambili
Izifundo ezi-3 ezivela ezinkampanini ze-Customer-Centric Companies
Thumela i-imeyili nge-SMTP Ku-WordPress Nge-Microsoft 365, i-Live, i-Outlook, noma i-Hotmail